UNGALITSHINTSHA NJANI ILIZWE OKANYE UMMANDLA NGAPHAKATHI WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Ungalitshintsha njani ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10
Ungalitshintsha njani ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10: Ilizwe okanye uMmandla (Ikhaya) indawo Windows 10 ibalulekile kuba ivumela uGcino lweWindows ukubonisa iiapps kunye namaxabiso azo kwindawo ekhethiweyo okanye ilizwe. Ilizwe okanye indawo yengingqi ekubhekiswa kuyo njengeNdawo yeJografi (GeoID) kwi Windows 10. Ngesizathu esithile, ukuba ufuna ukutshintsha ilizwe lakho okanye indawo ekuyo Windows 10 emva koko kunokwenzeka usebenzisa i-App yoseto.
Kwakhona, xa ufaka Windows 10, uyacelwa ukuba ukhethe ummandla okanye ilizwe ngokusekwe apho ukhoyo kodwa ungakhathazeki oku kungatshintshwa ngokulula xa uqala kwiWindows 10. Ingxaki ephambili yenzeka kuphela kwiVenkile yeWindows kuba umzekelo ukuba uhlala e-India kwaye ukhethe i-United States njengelizwe lakho kwaye ii -apps ezikwivenkile yeWindows ziya kufumaneka ukuze zithengwe ngeedola ($) kwaye isango lokuhlawula liya kufumaneka kwilizwe elikhethiweyo.
Ke ukuba ujongene nengxaki Windows 10 Ivenkile okanye amaxabiso osetyenziso akwiimali ezahlukileyo okanye ukuba ufuna ukufaka usetyenziso olungafumanekiyo kwilizwe lakho okanye kwingingqi unokutshintsha ngokulula indawo okuyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Ngapha koko, ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha masibone ukuba ungalitshintsha njani ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10 ngoncedo lwezifundo zidweliswe ngezantsi.
Indlela ye1: Guqula ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10 Useto
Indlela yesi-2: Guqula ilizwe okanye uMmandla kwiPaneli yokuLawula
Indlela yesi-3: Guqula ilizwe okanye uMmandla kuMhleli weRegistry
Cofa iqhosha leWindows + ukuvula Useto emva koko ucofe ku Ixesha kunye nolwimi.
Uyisebenzisa njani ipendrive njengenkunzi yegusha kwiifestile ezili-10
2.Kusuka kwimenyu yasekhohlo qiniseka ukukhetha Ummandla kunye nolwimi .
3. Ngoku kwimenyu esekunene phantsi kwe Ilizwe okanye ingingqi lahla phantsi Khetha ilizwe lakho (ex: India).
4.Vala iisetingi emva koko uqalise ukusebenza kwePC yakho ukugcina utshintsho.
1 Uhlobo ulawulo kukhangelo lweWindows emva koko ucofe ku Iphaneli yokulawula kwiziphumo zophando.
Qiniseka ukuba ungaphakathi Udidi Jonga emva koko ucofe ku Iwotshi, uLwimi kunye noMmandla.
3. Ngoku cofa apha Ummandla kwaye utshintshele ku Indawo yendawo.
4. Ukusuka Indawo yasekhaya lahla phantsi Khetha ilizwe olifunayo (ex: India) kwaye ucofe Faka isicelo ulandelwe ngu-Kulungile.
5.Vala yonke into emva koko uyiqale kabusha iPC yakho ukugcina utshintsho.
Nantsi indlela yokutshintsha ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba useto luthuthukile emva koko landela indlela elandelayo.
Cinezela i-Windows Key + R emva koko uchwetheze regedit kwaye ucofe u-Enter.
2.Zula uye kule ndawo ilandelayo yobhaliso:
HKEY_CURRENT_USER Iphaneli yokuLawula i-International Geo
3.Qiniseka ukuba ukhetha iGeo emva koko kwiwindows ekunene cofa kabini Uhlanga umtya wokuguqula ixabiso lawo.
4. Ngoku ngaphantsi Idatha yexabiso Intsimi sebenzisa ixabiso elilandelayo (Indawo yesazisi yendawo) ngokwelizwe olithandayo
Yiya apha ukufikelela kuluhlu: Itheyibhile yeendawo zeJografi
5.Vala yonke into emva koko uqalise ukusebenza kwakhona kwi-PC yakho.
Yiloo nto ufundile ngempumelelo Ungalitshintsha njani ilizwe okanye uMmandla ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
Indlela yokuVimba okanye ukuvulela iiNkqubo kwiWindows Defender Firewall
Ungazivimba njani okanye ungazivali iinkqubo kwiWindows Defender Firewall: Vula iFirewall, khetha i Vumela usetyenziso okanye inqaku ngokukhetha iWindows Defender Firewall.
Lungisa ingxaki yokuThumela okanye yokuFumana isicatshulwa kwi-Android
Ungayilungisa njani ingxaki yokuthumela okanye yokufumana imiyalezo kwifowuni ye-Android? Unobangela wale ngxaki unokuvela kwinethiwekhi, isixhobo, okanye
Ungaziqamba njani izixhobo zeBluetooth Windows 10
Lungisa ukudlala ngokuzenzekelayo ayisebenzi ngaphakathi Windows 10
Isonjululwe: Iseva ye-DNS ayiphenduli Impazamo kuyo Windows 10
Susa iWindows Watermark kwi Windows 10
Ubaleka njani ukuwa 3 kwi Windows 10?
Ungayitshintsha njani i-OpenDNS okanye iGoogle DNS kwiWindows
I-15 yeendlela eziGqwesileyo zikaGoogle zokuGcina (2021)
Kwenzeka ntoni xa ukhubaza i-Instagram okwethutyana?
Ungawufaka njani umhleli wePolisi yeQela (gpedit.msc)
I-CPU Cores vs Imisonto ichaziwe-Uyintoni umahluko?
u-win u-10 akazukucima
ayikwazi ukuqhagamshela kwinkonzo yohlaziyo lweWindows
Isikhangeli se-microsoft Edge asisebenzi
Ukuphazamiseka kubambekile ekukhupheleni uhlaziyo
Edge icon ilahlekile windows 10
windows isikrini esimnyama ngokulungiswa kwesikhombisi
Ikhaka lokuziphatha liqhubeka nokucima